Al-Shabaab oo hanjabaad u diray dowladda Kenya – Hornafrik Media Network
Al-Shabaab oo hanjabaad u diray dowladda Kenya
Dagalamayaasha Al-Shabaab ayaa soo saaray bayaan kale oo ku qornaa luuqada Engilish-ka kas oo ay ugu hanjabayeen dowladda Kenya, kadib weerar galabkii Jimcaha ee la soo dhaafay ay ka fuliyeen gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in dadka lagu dilay weerarkaas ay ku jireen xubno ka tirsanaa sirdoonka Kenya iyo shaqaale dowladda, isla markaana dadka la dilay la hubiyey inaysan heysan diinta islaamka.
“Galabnimadii Jimcaha oo ay taariikhdu ahayd 09 Rabiicu thaani 1441 Hijri, kuna beegnayd 06/12/2019, Ciidamo ka tirsan Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa hawlgal ka fuliyay gobolka Wajeer ee ka tirsan dhulka Muslimiinta lahaysto ee NFD. Hawlgalka oo dhacay saacaddu markii ay ahayd 17:00 galabnimo, waxaa lagu dilay 10 Saliibiyiin ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan hay’adaha sirdoonka qarsoon iyo shaqaalaha dowlada” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Al-Shabaab.
Sidoo kale qeyb ka mid ah warkooda ayey dowladda Kenya ugu goodiyeen inaysan nabad galiyo heli doonin inta ay ay heysato dhulka Soomaaliyeed ee NFD.
“Weerarkan wuxuu farriin kale u yahay dowlada gaalada ah ee Kenya, in shacabkeeda Saliibiyiinta ah ayasan nabadgelyo kunaalloon doonin inta ay dowladoodu gumaysi kusii haysato dhulalka Muslimiinta, boobayso khayraadkooda ayna dulminayso dadka Muslimiinta ah”. Ayaa lagu yiri warkan oo lagu baahiyey warbaahinta Al-Shabaab.
Maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday askar dil ka geysatay Muqdisho